सागर चन्द, कृष्ण लोथ्याल काठमाडौं, २८ साउन
रहस्यमयी घरका यसअगाडिका ४ शृंखलामा हामीले उक्त घरमा गर्भवती महिला आउने गरेको र ती महिलाले बच्चा जन्माउने गरेको विषय उल्लेख गर्यौं । त्यसरी जन्माइएका बच्चा कहाँ जान्छन् ? कसले लान्छ भन्ने विषयमा पनि यस अघिका शृंखलामा हामीले उल्लेख गरेका छौं । गर्भवती महिला खोजेर ल्याई बच्चा जन्माउन लगाउने उक्त संस्था चर्चसँग जोडिएको तथ्य पनि हामीले अघिल्ला शृंखलामा प्रस्तुत गरिसकेका छौं । यो शृृंखलामा हामी यसका कानूनी पक्षमा केन्द्रित हुनेछौं ।
‘भ्वाइस अफ फिट्स’ संस्था सञ्चालक सोमन (एलिसा) राईका अनुसार त्यहाँ जन्मिएका बच्चा धर्मपुत्रका रूपमा अरू कसैलाई दिइन्छ । राई भन्छन्, ‘बच्चा नभएको परिवारलाई दिने । बच्चाको खाँचो भएकालाई दिने ।’
तर, कानूनले भने अनधिकृत रुपमा बच्चा धर्मपुत्र/धर्मपुत्रीका रुपमा अंगीकार गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
मुलुकी देवानी संहिताको परिच्छेद ८ दफा १७७ को उपदफा १ अनुसार ‘कसैले कुनै बालबालिकालाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न चाहेमा कानूनको रीत पुर्याई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको लिखतसहित सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिनुपर्छ ।’
तर, राईको संस्था वा त्यहाँबाट बच्चा लिनेहरूले भने अदालतमा निवेदन दिएका छैनन् ।
ललितपुर जिल्ला अदालतका स्रेस्तादार नागेन्द्रकुमार कालाखेतीका अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा अदालतमा धर्मपुत्र/धर्मपुत्री राख्न पाऊँ भनेर एउटा मात्र निवदेन आएको छ ।
तर, राईको संस्थामा पछिल्लो ८ महिनामा १३ बच्चा जन्मिएका छन् । संस्थाले यीमध्ये अधिकांश बच्चा धर्मपुत्र/धर्मपुत्रीका रुपमा दिएको राई आफैं बताउँछन् ।
तर, उनले वा उनको संस्थाले अहिलेसम्ममा धर्मपुत्र/धर्मपुत्री राख्न वा दिन अदालतमा निवेदन दिएको छैन ।
‘अदालतमा निवेदन नै नदिएर । अदालतले निर्णय नै नगरीकन कसैले पनि धर्मपुत्र/धर्मपुत्री राख्न र दिन पाउँदैन । यो सरासर गैरकानूनी हो,’ भन्छिन्, ‘अधिवक्ता लक्ष्मी दाहाल (रावल) ।
संस्था सञ्चालक राईले ‘समाज सेवा’को आवरणमा कानून उल्लंघन गरेको बताउँछिन् अधिवक्ता दाहाल ।
सन् २०१९ मा मात्रै राईको संस्थामा १३ जना महिलाले बच्चा जन्माइसके । तर, ती बच्चा कहाँ गए ? कसले लग्यो भन्ने विवरण अदालतमा छैन ।
‘धर्मपुत्र/धर्मपुत्र जस्तो गम्भीर विषयमा खेलबाड गरेको छ यो संस्था (भ्वाइस अफ फिट्स)ले,’ अधिवक्ता दाहाल भन्छिन्, ‘धर्मपुत्र/धर्मपुत्री भनेको मानिसको जीवनसँग जोडिएको विषय हो । कसैको जीवनसँग जोडिएको विषयमा यसरी एउटा संस्थाले निर्णय गर्न पाउँदैन ।’
रहस्यमयी घर–४ रहस्यमयी घरको चर्च कनेक्सन
नेपालले सन् १९९० मा अनुमोदन गरेको बाल अधिकारसम्बन्धीको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा पनि सरकारी स्वीकृतिबेगर धर्मपुत्र/धर्मपुत्री राख्न नहुने उल्लेख छ ।
यति मात्रै होइन, २०६३ सालमा तत्कालीन न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको इजलासले दिएको आदेशले पनि बालबालिका सम्बन्धमा कसैले पनि आफूखुसी केही पनि गर्न नपाउने आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश रेग्मीले जारी गरेको परमादेश (बाध्यकारी आदेश)मा भनिएको छ, ‘गर्भैदेखि बच्चाको सम्बन्ध बाबुआमासँग जोडिएकै कारण उसको आकृति एवं स्वभाव पनि प्रायः मिल्दोजुल्दो हुन जान्छ । बोली नफुट्दै उसले आफ्नो र पराई छुट्याइसकेको हुन्छ । तोते बोलीको क्रमसँगै संस्कृतिको पहिचान पाइसकेको हुन्छ अनि राष्ट्रियताको महत्त्व बुझिसकेको हुन्छ ।’
परमादेशमा अगाडि भनिएको छ, ‘अबोध बच्चालाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको नाउँमा आमाको काखबाट सदाका लागि अर्कालाई दिनु भनेको देखादेखी बालबालिकाको मौलिक अधिकार हनन गर्नु हो । जन्म दिएकै नाताले बालबच्चामाथि आफूखुसी गर्न पाउने उन्मुक्ति कसैलाई कुनै पनि कानूनले प्रदान गरेको छैन ।’
राईको संस्थाको उद्देश्यमा ‘भ्रुण तथा शिशुको सुरक्षाका लागि भ्रुण तथा शिशु अंगीकरण सम्पर्क निर्माण गर्ने’ उल्लेख छ ।
रहस्यमयी घर–३ जन्मनेबित्तिकै बच्चा छोडेर कहाँ जान्छन् आमा ?
तर, अधिवक्ता दाहालका अनुसार कसैले पनि शिशु अंगीकरणका लागि सम्पर्क कार्यालय खोल्न पाउँदैन ।
उनी भन्छिन्, ‘शिशु अंगीकरण कार्यालय खोलेर के बच्चाहरूको व्यापार गर्न खोजेको हो ? बच्चाहरूको पसल थाप्न खोजेको हो ?’
यसबाहेक राईको संस्थाको मूल्य मान्यतामा उल्लिखित, ‘परमेश्वरप्रति उत्तरदायी बनाउने’ विषयमा पनि अधिवक्ता दाहाल प्रश्न गर्छिन् ।
‘यो कसरी सम्भव हुन्छ ? समाज सेवाका लागि खुलेको संस्थाले मान्छेलाई परमेश्वरप्रति आस्थावान् बनाउन मिल्छ ?’ उनी अगाडि भन्छिन्, ‘नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो । यहाँ सबै जना देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् ।’
बच्चा अंगीकरणको सम्पर्क निर्माण गर्ने, परमेश्वरप्रति उत्तरदायी बनाउने प्रावधान राखेर संस्था दर्ता नै कसरी भयो भन्ने विषय पनि शंकास्पद रहेको बताउँछिन् अधिवत्ता दाहाल ।
के बच्चा बिक्री गरिन्छ ?
राईको संस्थाले विदेशमा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री नपठाएको दाबी गर्छ । तर, राईको संस्थाले स्वदेशमै पनि धर्मपुत्र वा पुत्री दिएको विवरण सरकारी निकायसँग छैन । राईको संस्थाले बच्चा बिक्री गरेको स्वतन्त्र पुष्टि नभए पनि राईको संस्थामा आएर बच्चा जन्माएर गएका महिलाले बच्चा लिनेसँग पैसा लिएको बताउँछन् राई आफैं ।
उनी भन्छन्, ‘हामी पैसा लिदैनाैं । तर, बाहिर गएर भने केही महिलाले पैसा, मोबाइल र उपहार लिएको थाहा पाएका थियौं ।’ राई भन्छन्, ‘हामी यहाँ केही लेनदेन गर्दैनाैं । तर, बाहिर गएर उनीहरू (बच्चा लिने र दिने)ले के गर्छन्, हामीलाई थाहा हुँदैन ।’
राईले आफ्नो संस्थाले पैसा नलिएको दाबी गरे पनि शिलापत्रले फेला पारेका केही तस्बिर भने शंकास्पद देखिएका छन् । यी तस्बिरमा अंग्रेजीमा ‘फुल इन पेड’ अर्थात् ‘पूरा मूल्य तिरिएको’ लेखिएको छ ।
राईको संस्थामा आएर बच्चा जन्माएर आफ्नो घर फर्किन लागेका महिलालाई त्रिस्चियन परम्पराअनुसार बिदाइ गरिन्छ ।
यी तस्बिर यस्तै बिदाइका हुन् ।
विवाह नगरेकी महिलाले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री दिन पाउँछन् ?
धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीसम्बन्धी मुलुकी देवानी संहितामा भएको व्यवस्थामा विवाहित दम्पतीले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीका रूपमा आफ्नो सन्तान दिन पाउँछन् ।
तर, राईको संस्थामा आउने अधिकांश गर्भवती अविवाहित हुन् । अधिवक्ता दाहाल भन्छिन्, ‘अविवाहित महिलाले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री दिन पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा कानूनले प्रस्ट व्यवस्था गरेको छैन ।’
मुलुकी संहिताको दफा १७५ अनुसार सम्बन्ध विच्छेद भएको, बाबु वा आमा पत्ता नलागेको अवस्थामा बच्चा जोसँग छ, उसले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री दिन पाउँछन् ।
तर, राईको संस्थामा गर्भवती भएर आउने धेरैजसो युवती प्रेमीले धोका दिएका हुन्छन् । अधिवक्ता दाहाल भन्छिन्, ‘यस्तो अवस्थामा त्यहाँ बाबु वा आमा पत्ता नलागेको भन्न मिल्दैन ।’
सम्बन्ध विच्छेद नभएको, बाबु र आमा दुवै जीवित भएको अवस्थामा धर्मपुत्र/धर्मपुत्री दिँदा दुवैको सहमति लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
कानूनअनुसार एक मात्र सन्तान भएका दम्पतीले आफ्नो सन्तान धर्मपुत्र/धर्मपुत्री दिन पाउँदैनन् ।
मुलुकी संहिताकै दफा ७४ अनुसार ‘कुनै पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो पुरुष र महिलाबीच स्वतः विवाह भएको मानिनेछ ।’
तर, राईको संस्थाले भने गर्भवती युवतीलाई सामाजिक बेइज्जतीको बाध्यता सुनाउँदै उनीहरूका बच्चा धर्मपुत्र र धर्मपुत्रीको नाममा दिन लगाउँछ ।
गर्भपतन सजिलो कि बच्चा जन्माउन ?
राईको संस्था ‘भ्वाइस अफ फिट्स’ले देशभरका विभिन्न स्थानबाट अनिच्छित गर्भधारण गरेका महिला खोजेर ल्याउँछ ।
अब प्रश्न उठ्छ, अनिच्छित गर्भ धारण गरेका महिलालाई महिनौं घर बाहिर बसेर बच्चा जन्माउनु बढी गोपनीय हुन्छ कि नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गएर गर्भपतन गराउन ?
गर्भवतीको मन्जुरीमा १२ हप्तासम्मको गर्भ स्वीकृति प्राप्त अस्पतालमा पतन गर्न पाइने कानूनी व्यवस्था छ ।
नेपालले पहिलोपटक मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको २८ ‘ख’ अनुसार सरकारले सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रक्रिया १० पुस २०६० मा राजपत्रमा प्रकाशित नै गरेको थियो ।
यसैलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले २०७५ देखि ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन’ नै लागू गरिसकेको छ ।
कानूनले नै गर्भपतन गराउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । देशभरका लगभग सबै स्थानमा गर्भपतन गराउने स्वास्थ्य संस्था छन् ।
‘अनिच्छित गर्भधारण गरेका महिला यति टाढाबाट यहाँ बच्चा जन्माउन आउँछन् भन्ने कुरा नै शंकास्पद छ,’ अधिवक्ता दाहाल प्रश्न गर्छिन्, ‘यति सहजै गर्भपतन गराउन छाडेर महिनौं घर बाहिर बस्नुपर्ने गरी कोही बच्चा जन्माउन कसरी आउँछ ?’
(शृंखला जारी छ, शिलापत्र लग इन गर्दै गर्नुहोस् )
रहस्यमयी घर-२ बच्चा जन्माउने घर तर अस्पताल होइन
रहस्यमयी घर–१ गोदावरीको याे घरमा किन जान्छन् गर्भवती ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन २९, २०७६, ०४:१०:००